Miisaaniyadda gu’ga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Osäker världsekonomi präglar budgeten. Foto: Maja Suslin/Scanpix.
Publicerat onsdag 16 april 2008 kl 15.52
Wasiirka maaliyadda oo shaleyto maalintii salaasadda taariikhduna aheyd 15-kii Apriil soo bandhigey miisaaniyadda xilliga Gu’ga.
Xaaladda wanaagsan ee dhaqaalaha dowladda, ayaa suurtagal ka dhigeysa maalgelin la xiriirta qidmadda oo la dhimo iyo mushaarooyinka dadyoowga howlgabka, waa marka laga hadleyo kuwooda dhaqaalaha liita oo la kordhiyo, waxey ka mid ahaayeen ballanqaadyadii miisaaniyadda dawladda ee xilliga, uuna shaleytana soo bandhigey wasiirka dhaqaalaha Anders Borg.
- Haddii aan ku guuleysanno siyaasaddayada suuqa
shaqada waxaa heerkii loo maleynayey kor uga sii kacaya mushaarooyinka howlgabka.
Intaa waxaa dheer inaan xoogga saari doono howlgabka, weliba kuwooda dhaqaalaha liita. Waa ballan qaad aan sheegney inaan dib arrinkaa u eegi doono.
Qidmadda mushaarooyinka oo la dhimo 250 bishii, gacan ka geysashada hagaajinta infrastrakjarka ahna mustaqbalka dalka, isku day in xoogga leysugu geeyo sidii loo maal gelin lahaa cilmi barista iyo waxbarashada iskuulaadka. Kuwaasina oo ah hoowlaha mustaqbalka dalku ku xiran yahey. Sida uu sheegey Anders Borg, wasiirka maaliyadda ee dalka Iswiidhen mar uu saxaafadda u soo bandhigayey shaleyto miisaaniyadda Gu’ga.
Laba miisaaniyadood sannadkii
Dalkan Iswiidhen ayaa sannadkii laba jeer ey wasaaradda uu madaxda ka yahey Anders Borg soo bandhigtaa miisaaniyadda dalka loo dajiyey.
Miisaaniyadda Deyrta iyo tan Gu’ga.
Miisaaniyadda deyrta ayaa iyadu ah midda ugu muhiimsan, iyadoona tan gu’ga lagu saxo ama lagu kordhiyo hadba qorshaha ey dawladda dalka ka talisaa ku talo jirto ama damacsan tahey inta u dhaxeysa miisaaniyad sannadeedka labada deyrood.
Xaaladda dhaqaale ee dalka
Dalka Iswiidhen ayaa dhaqaalihiisu sannooyinkii ugu dambeeyey ku jirey waxa loo yaqaan Konjuktuur sarreeya, ama dhaqaale wanaagsan ee heer sare gaarsiisan. Waana caadi in kolka dhaqaaluhu kor u kaco ey dad badani shaqo helaan, taasina waxey keentaa in uu sii kordho saameynna ku yeeshe warshadaha alaabaha kala duwan soo saara in alaabtooda la iibsado.
Dhaqaalahaa wanaagsan ayaa kor u kiciisa waxaa bar bar socda in mushaarku kor u kaco sidoo kalena sicir bararka. Taasi ayaa kolkaa dhalisa in la galo xilli dhaqaaluhu hoos u dhaco, waana midda loo yaqaan Konjuntuurka hooseeya.
Wasiirka dhaqaalaha Anders Borg, ayaa haddaba miisaaniyaddiisa ku saadaaliyey in dhaqaalaha dalka iyo adduunweynuhuba ku sugan yahey wel-wel.
- Waxaa iminka lagu jiraa xaalad ka duwan middii lagu jirey. Waxaa istaagey, horumarkii korriinka wax soo saarka.
Dalka dhaqaalihiisa waxaa saameyn ku leh hadba meesha uu mareyo dhaqaalaha adduunka, haddey noqon laheyd maalgelinta iyo soo waaridda baayacmushtarka. Islamarkaana suurtagl maaha in indho kale middaa lagu eego. Sidaa daraadeed, si aan u sahalno caqabadaha xaaladdaa.
- Waxaan isku dayeynaa inaan breega ama fariinka aan lugta ka dabcino, islamarkaana annagoo iska ilaalineyna inaan sheelaraha u qabano.
Sidoo kale waxey dawladdu hoos u dhigtey heerkii la maleynayey ee kor u kaca dhaqaalaha sannadkii iyo tirada dhimista shaqa la’aanta, iyadoona la saadaalineyo in shaqa la’aantu sii yaraan doonto inta lagu jiro xilliga Gu’ga, si ey kadib kor ugu kacdo shaqa la’aantu. Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha.
Machadka saadaalinta dhaqaalaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan KI, ayaa sida uu qabo sheegey iney khasnadda dawladda soo geli doonto 30 bilyaard, dheeriya ee koronka iswiidhishka. Taasi waxey dawladda u suurtagelineysaa sidii ey ugu miisaaniyad gelin laheyd qorshaheeda iyo isbadellada ey damacsan tahey. Hase yeeshee wasiirka dhaqaalaha ayaa sidii lagu yaqiin wasiiradda dhaqaalaha, wuxuu sheegey in loo baahan yahey taxadar.
20 milyaard, ayaan oran lahaa, waana sawir jawaabtiisa lagu muujineyo miisaaniyadda gu’ga. Anders Borg wuxuu sheegey in loo baahan yahey taxadar.
- Waxaa loo baahan yahey taxadar. Waxaan ka mid ahey dadyoowga taxadarka jecel. Suurtagal maaha inaan ku tallaabsano ficillo ama hoowlo qal-qal gelinaya mustaqbalka dheer.
Kadib soo bandhigidda miisaaniyadda Gu’ga ee wasiirka dhaqaaluhu soo bandhigey, ayey sida caadaduba aheyd ka dhacdey xarunta baarlamanka dood socotey muddo kor u dhaafeysa laba saacadood, oo mudanayaasha baarlamanku uga doodayeen miisaaniyadda.
Afhayeenka dhanka dhaqaalaha ee xisbiga Socialdemokratka, kana mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa suulka hoos ugu dhigey miisaaniyadda Anders Borg.
- Waxaan ula jeedaa in aaney dawladdu ka faa’iideysan xilliga wanaagsan ee dhaqaaluhu heerka sare mareyo.
Dawladdu waa ey lumisey suurtagalkaa. Miisaaniyad la soo bandhigey xilliga noocaniya ee lagu jiro oo ey ka maran yihiin suurtagal miisaaniyad gelin, habwanaagga bulshada iyo suuqa shaqadu, xaqiiqdii iilama muuqato mid wanaagsan. Thomas Östros, afhayeenka dhanka dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka Socialdemokratka.